Saxan silsilad leexleeyaha compost waxay dadajisaa habka kala daadsanaanta qashinka dabiiciga ah. Way fududahay in la shaqeeyo oo leh waxtar badan, markaa qalabkan isku-dhafan waxaa si weyn loogu isticmaalaa kaliya ma aha warshad soosaarida bacriminta dabiiciga ah, laakiin sidoo kale nafaqeynta beeraha.
Kormeer ka hor inta aan la sameyn tijaabada orodka
◇ Hubi in dhimayaasha iyo dhibcaha saliidda sifiican loogu saliiday.
Hubi danab koronto. Awood la qiimeeyay: 380v, hoos u dhaca cadaadiska waa inuusan ka yarayn 15% (320v), oo aan ka sareyn 5% (400v). Mar haddii laga gudbo xadkaas, wadista lama oggola.
◇ Hubi in isku xidhka matoorka iyo korontada ay amaan yihiin iyo in mashiinka lagu xidho fiilooyin si amaanka loo sugo.
◇ Hubi in dhammaan kala-goysyada iyo iskuullada isku xidha ay adag yihiin. Fadlan adkee haddii ay dabacsan yihiin.
Hubi dhererka raso.
Samaynta Tijaabada Imtixaan La'aan
Gelinta qalabka bacriminta hawlgala. Jooji leeyaha compost isla marka jihada wareegga la rogo, ka dibna beddel jihada leexashada ee isku xirka wareegga saddexda waji Inta lagu jiro hawlgalka, dhagayso haddii hoos u hayuhu leeyahay dhawaaq aan caadi ahayn, taabashada heerkulka culeyska si aad u eegto inuu ku jiro heerka heerkulka, iyo inaad fiiriso haddii uu jiro khilaaf u dhexeeya daab daabaca wejiga iyo dusha dhulka.
Tijaabad ku socota Load
① Bilow compost windrow leexleeyaha iyo bamka Haydarooliga. Adoo si tartiib ah u dhigaya santuuqa silsiladda hoose ee taangiga halsano, adoo hagaajinaya booska saxanka silsiladda iyadoo loo eegayo sida dhulka uu u siman yahay: ku xaji baalayaasha leexleeyaha compost 30mm dhulka ka hooseeya mar haddii qaladka isku dhafan ee heerka dhulku ka yar yahay 15mm. Hadduu ka sareeyo 15mm, garbahaas waxay kaliya ku hayn karaan 50mm dhulka. Inta lagu jiro isku-darka, markii ay garbaha dhulka ku dhacaan, korna u qaadaan saxanka silsiladda si looga fogaado waxyeelo soo gaadhoqalabka compost Turner.
② Inta lagu gudajiro howsha tijaabada oo dhan, hubi idaacadaha la isku gudbiyo si dhakhso leh marka la maqlo cod aan caadi ahayn.
③ Hubi in qalabka korontada ku shaqeeya si deggan u shaqeynayaan.
Feejignaanta Arrimaha ku jira saxanka Chain Compost Turner Operation
Shaqaaluhu waa inay ka fogaadaan aaladaha wax lagu rido, si looga hortago shilalka. Raadinta hareeraha compost-ka ka hor intaan la hawl gelin.
▽ Soo saarista, dayactirka iyo buuxinta saliida saliidda lama ogola.
Ku shaqeynta si adag iyadoo la raacayo habraacyada loo qoray. Waa mamnuuc in laga shaqeeyo jihada ka soo horjeedda.
Operators Hawlwadeeno aan xirfad lahayn looma oggola inay mashiinka ku shaqeeyaan. Xaaladaha cabitaanka khamriga, raaxo la'aanta jireed ama nasashada xun, hawlwadeenadu waa inaysan ku shaqeynin qalabka loo yaqaan 'helix compost Turner'.
Tracks Jidadka oo dhan ee wiishka dabaysha waa in lagu xidhaa ujeeddo nabadgelyo darteed.
▽ Awoodda waa in la gooyaa markii la beddelayo booska ama fiilada
▽ Feejignaanta waa in la bixiyaa si loo ilaaliyo loona ilaaliyo silsiladda korantada ee aadka u hooseysa si ay u dhaawacdo baallayaasha wareegaya marka la dhigayo saxanka silsiladda.
Qalabka baaritaanka ka hor intaadan wadin
● Hubi in dhammaan xirmooyinka ay ammaan yihiin, iyo haddii nadiifinta silsiladda saxanka ee qaybaha gudbinta ay habboon tahay. Ka saarida aan habooneyn waa in lagu hagaajiyaa waqtiga.
Subag dhalada hoose - hubi heerka saliida ee sanduuqa gearboxka iyo taangiga Haydarooliga.
● Hubso in isku xirnaanta siligyadu ay sugan yihiin.
◇ Ka saarida haraaga mashiinka iyo agagaaraha
Sifeeyaa dhammaan dhibcaha sifaynta
Waxyaabaha dayactirka toddobaadlaha ah
Si loo hubiyo saliida geerka oo aad ku darto saliid ku filan.
Si loo hubiyo xiriirada kontoroolka xiriiriye. Haddii waxyeello soo gaadhay, isla markiiba beddel.
Si loo hubiyo heerka saliida ee sanduuqa haydarka, iyo xaalada qufulka ee iskuxirka marinada saliida. Beddelka shaabadaha waqtiga saxda ah haddii saliid daato.
Waxyaabaha kormeerka xilliyada ah
Hubinta xaaladaha shaqada ee soo-dhimayaasha mootada. Haddii uu jiro buuq aan caadi ahayn, ama kuleyliyaha, joogso oo si dhakhso leh u hubi mashiinka.
Hubinta santuuqa dharka. Boosas si xun u xirmay waa in la beddelaa.
Dhibaatooyinka guud iyo hababka cilad bixinta
Hababka cilad bixinta
Dhibaato Ku Noqoshada
Lakabyada ceyriinka oo aad u qaro weyn Ka qaadida lakabyada aan faafin karin
Fallaadhihii iyo garbaha si xun u qaabeeyey
Dayactirka garbaha iyo fallaadhihii
Qalabka ayaa dhaawacmay ama ku dheggan
by hay'adaha shisheeye
Marka laga reebo jir shisheeye ama
Socodku ma ahan mid siman,
yareeyaa buuq ama qandho
Waxaa jira arrimo kale oo ku saabsan
Nadiifinta arrimaha kale
hoos u dhigaya qaylada ama heerkulka sare
La'aan saliid dufan
Ku darista saliida saliidda
Dhibaato ama guuldarro gudaha
fiirinaya mootada, oo ay la socoto buuq
Xirashada ama dhaawaca badan
Usheeda dhexe Gear noqoshada leexashada
Ka saarida ama badalida mid cusub
Danab aad u hooseeya ama aad u sarreeya
Dib-u-bilaabida jebinta compost
ka dib markii danabku caadi yahay
Yaraynta saliida yaraanta ama waxyeelada
Hubinta soo dejiyaha si aad u aragto
qalabku ma socon karo
wareegga waa caadi
Ku dheji xiriir kasta